बैंकासुरेन्स किन बन्द गरियो ? खोज्नुपर्ने बेला आएको छः प्राइम लाइफका सीइओ मनोजकुमार भट्टराई – Clickmandu
बैंकासुरेन्स किन बन्द गरियो ? खोज्नुपर्ने बेला आएको छः प्राइम लाइफका सीइओ मनोजकुमार भट्टराई
क्लिकमान्डु २०७६ भदौ २५ गते १५:३४ मा प्रकाशित
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स, ग्रान्ड बैंकहुँदै २०७१ सालदेखि प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका मनोज कुमार भट्टराईले बीमा क्षेत्रमा करिब २० वर्ष बिताइसकेका छन् । बैंक तथा बीमा क्षेत्र दुबैलाई नजिकबाट बुझेका भट्टराईसँग बीमा बजारको पछिल्लो अवस्था, यस क्षेत्रकोसम्भावना, चुनौती, समस्या र समाधानका साथै प्राईम लाईफसँग सम्बन्धित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि दिलु कार्कीले गरेको कुराकनीको सम्पादित अंशः
मनोजकुमार भट्टराई, सीइओ, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स
बीमा क्षेत्र अहिले कस्तो अवस्थामा छ ?
समग्रमा बीमा क्षेत्रको अवस्था भने बाहिर मानिसहरुले हल्ला गरेको जस्तो छैन । २ वर्ष अघिसम्म १०/११ प्रतिशतको बीचमा रहेको बीमाको पहुँज बढेर २५ प्रतिशतमा पुगेको छ भनिएको छ । तर दायरा बढे पनि त्यस अनुसारको सन्तुलन मिलेको भने छैन । आजको दिनमा कति बीमा भयो भनेर भन्नु भन्दा पनि हुनुपर्ने जति बीमा भएको छ कि छैन ? भन्ने अहम् प्रश्न हो ।
आवश्यकताभन्दा बढी र आवश्यकता भन्दा घटी बीमा गर्ने गरिएको छ । जसको बीमा हुनपर्ने हो उसको बीमा भएको छ कि छैन ? त्यो पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुमा अन्डर इन्स्योरेन्स र ओभर इन्स्योरेन्स भइरहेका छन् । अन्डर इन्सोरेन्समा १० लाख रुपैयाँको बीमा गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँको बीमा गरेर बसेको छ । ओभर इन्सोरेन्समा बीमा गर्न सक्ने क्षमता २ करोड रुपैयाँ हो । तर ५ लाख रुपैयाँको मात्र बीमा गरेर बसेका हुन्छन् । उनीहरुको उदेश्य के हो त्यो पनि बुझ्नु पर्छ ।
गत आर्थिक वर्ष बीमा कम्पनीहरुले १ खर्बको बीमा शुल्क संकलन गरे । त्यसमा ७६ अर्ब जीवन बीमा कम्पनीको छ भने २५ अर्ब रुपैयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको हिस्सा २५ प्रतिशतमात्र यो अर्थतन्त्रको सुचकको हिसाबले राम्रो होइन । निर्जीवन बीमा थोरै हुनु भनेको आर्थिक क्रियाकलाप कम हुनु हो ।
बैंकलाई एजेन्सी बनाएर बीमा पोलेसी बेच्ने भनेको भर्खरै मात्र शुरु भएको त होइन । पहिलेबाट नै बैंकहरुलाई संस्थागत एजेन्ट बनाएर बीमा पोलेसीहरु बिक्री गरिन्थ्यो । प्राइम लाईफ शुरु भएको १२ वर्ष भयो । हामीले ११ वर्षअघिदेखि केही बैंकहरुसँग संस्थागत एजेन्सीको रुपमा काम गर्दै आएका थियौं । हिँजोसम्म नआएको कुरा आज कसरी आयो । र, बन्द गरियो ? यो खोजीको विषय हो ।
सबै कुरालाई थाति राखेर जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई मात्र हेर्न हो भने बीमाको विकास र विस्तार असाध्यै राम्रो छ । बीमाका सम्भावना जिवन र निर्जीवन दुवैमा प्रचुर छन् । तर तथ्यांकलाई मात्र हेरेर अब बीमाको दायरा बढ्यो भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि छैन । नेपाल अझैपनि बीमाको प्रचुर सम्भावनाहरु छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले सही खालका बीमा योजनाहरु चाँही ल्याउनु पर्यो । आर्थिकरुपले सक्रिय जनसंख्या ८५ प्रतिशत होलान् । बीमाको पहुँज ती आर्थिकरुपले सक्रिय जनसंख्यामा पुर्याउनु पर्छ । तर बीमा व्यवसाय बढाउने खालका बीमा योजना भन्दा पनि वास्तवमा बीमाको दायरा बढ्ने प्रकारका योजना ल्याउनु पर्छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रिमियममामात्र ६० प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धि गरेका थिए । गत वर्ष ४६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोे छ । संख्यात्मक हिसाबमा पनि अघिल्लो वर्ष ९ लाख मानिसको नयाँ बीमा भएको थियो भने गत वर्ष ३३ प्रतिशतले बढेर १२ लाख मानिसका नयाँ बीमा भएको छ ।
तर यसलाई हामी त्यति उत्साहप्रद भनेर विश्लेषण भने गर्दैनौं । बीमाको दायरा बढ्यो भनिरहेको छ । बीमा पहुँज एकै पटक यति धेरै बढ्यो भनिएको छ । तर आज बीमा गर्यो, बीमा गरेको १ महिना भित्रमा कर्जा लिन पाइने खालको बीमा योजनामा मानिसहरुको आकर्षण बढेर त्यो बीमा पोलेसीमा मात्र बीमा गर्ने मानिसको भिड लागेको हुन्छ । यो त बीमा भएन ।
वास्तविक बीमा भनेको के हो ?
बीमाको एउटा प्रमुख उदेश्य छ । बीमाको प्रमुख सिद्दान्त नै के हो भने ‘रिस्क कभर’ गर्ने हो । आफ्नो आर्थिक क्षमताले भ्याएसम्मको बीमा गर्ने हो । बीमाको सिद्दान्त अनुसार नै बीमा गर्न हो भने मनिसहरुले ट्रम इन्सोरेन्स गर्न पर्छ । आजका दिनमा ४० वर्षको मानिस छ भने १ लाख रुपैयाँको प्रतिहजार ३ रुपैयाँ २० पैसामा आफ्नो बीमा गर्न पाउँछ । भन्नाले १ लाख रुपैयाँको ३ सय २० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर १ करोडको २ हजार रुपैयाँको बीमा हुन्छ । २ हजार रुपैयाँ तिरेर १ करोडको बीमा हुन्छ भने त्यो साच्चिकैको बीमा हो । ३२ हजार तिरेर १ करोडको बीमा गर्ने पो बीमा त, मानिसको लाईफ भ्यालु त १ करोडभन्दा माथिको हुनु पर्यो नि ।
हिँजोको दिनमा ९ वटा कम्पनीहरु हुँदाहुँदै १० वटा कम्पनीहरु भित्र्याइयो । ती १० वटै कम्पनीहरु धेरै भएको हो भने पुराना ९ वटा कम्पनीहरुमा नाम नै तोकेर यसमा मर्ज भएर कारोबार गर भनेर नियामक निकायले भन्नु पर्यो । अब संचालनमा आइसकेका बीमा कम्पनीहरु त जो सरर्भाइभ हुनसक्छ उसले गरेर खान्छ । सरर्भाइभल र फिटनेसको कुरा हो विजनेश हो । समय अनुसार चल्न सक्नुपर्छ ।
यहाँ त ७ हजार रुपैया तिरेर १ लाखाको बीमा गरिरहेका हुन्छन् । अनि बीमा गरेको १ महिनामा नै कर्जा लिएका हुन्छन् । कर्जा लिने प्रयोजनका लागिमा मात्र बीमा गर्नु त बीमा होइन । बीमा भनेको सानो सानो रकम जम्मा गरेर रिस्क कभर गर्दै र रिस्क ट्रान्सफर गर्दै जाने भन्नु पर्नेमा एक मुस्ट्र प्रिमियम तिरेर बीमा गरेर १ महिनामा नै कर्जा लिनेलाई सहि बीमक वा सही बीमा भएको भन्न मिल्दैन ।
हालसम्म ७२ लाख जनाको जीवन बीमा भएको छ । तर यो ७२ लाख जनाले बीमा गरे भनेर भन्न मिल्दैन । यो ७२ लाख वटा बीमा पोलेसी बिक्री भएको हो । एक जनाले ४/५ वटासम्म बीमा पोलेसीहरु खरिद गरेका छन् । यो ७२ लाखभित्र एक जनाले खरिद गरेका सबै बीमा पोलेसीहरु गणना गरिएको हुन्छ । बीमाहरुमा ल्याप, सरेन्डर, म्याचुरीटी, डेर्थ, मल्टििपल पोलेसी छन्, यी सबै कुराले गर्दा यो तथ्यांक आफैमा कत्तिको सहित भन्ने कुरा नै अन्योल छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच बढी नै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ भनिन्छ, कस्तो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ?
बीमा भन्ने पेसा र व्यवसाय दुवै इज्जतिलो हुनु पर्छ भन्ने हिसाबले काम गर्दा अभिकर्तालाई लोभलालच देखाएर, अन्डर इन्सोर, ओभर इन्सोर गराएर तथा इसोरेवल इन्टेस नभएकालाई पनि इसोरेन्स गराएर गलत हो । तर मैले नराम्रो देखेको कुरालाई अर्कोले राम्रो पनि देखेको हुन्छ । र, मैले राम्रो देखेको कुरा अरुको नजरमा राम्रो पनि हुनसक्छ । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि केही नकारात्मक अभ्यासहरु भने भएको छ ।
आफ्नो आफ्नो कम्पनीको व्यवसाय पोलेसी अनुसारको सोचाइ फरक छ । तर संख्यात्मक हिबासले मात्र बढाएर मात्र हुँदैन । वास्तविक बीमा भएको हुनु पर्छ । विभिन्न लोभ–लालचमा मात्र बीमा गराउने नभएर साच्चिकै बीमा गराउनु पर्छ । बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरणसँगै एक प्रकारको बचत हो भन्ने मानसिकता बनाउनु पर्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले १० लाख रुपैयाँको बीमा गर अनि २ महिना पछि ९ लाख रुपैयाँ तिरेर ६ लाख रुपैयाँ कर्जा लैजाउ भन्नेलाई बीमा भन्न मिल्दैन । तर यसरी नै बीमा पोलेसी बेच्ने बीमा कम्पनीहरुलाई त यो नै बीमा हो भन्ने लागेको हुनसक्छ । अर्को कुरा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जब नयाँ कम्पनीहरु आउँछन् यस्तो प्रतिस्पर्धा त बढ्छ नै ।
त्यसोभए नयाँ थपिएका १० वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु बढी भएका हुन् त ?
जीवन बीमाको क्षेत्रमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी संख्यात्मक हिसाबले बढी नै भएको छ । ९ वटा भइरहेको ठाँउमा १० वटा थपिनु भनेको वास्तवमै धेरै हो । संख्यात्मक हिसाबमा एकै पटक १० वटा कम्पनीहरु आउदाँ त्यो कम्पनीहरुले पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन केही न केही गर्न पर्छ । कम्पनी संचालनमा आइसक्यो । १ अर्ब ४० करोड प्रमोटरहरुले लगाइसकेका हुन्छन् । लगानीको प्रतिफल लिनको लागि केही न केही गर्नै पर्यो । कम्पनी संचालन गर्न नाफा कमाउन जस्तो पनि व्यवयायीक पोलेसीहरु ल्याउँछन् ।
पुराना बीमा कम्पनीहरुमा त्यो समस्या छैन । तर नयाँ आएका कम्पनीहरुलाई प्रमोटरहरुले जसरी भएपनि नाफा चाहिन्छ भनेर दवाब दिएका हुन्छन् । अनि विचरा सीइओहरुले आर्दशको कुरा गरेर हुँदैन । जसरी भएपनि विजनेश ल्याएर देखाउनु पर्छ ।
कम्पनी आज ल्याएको बीमा पोलेसीले भविस्यमा कम्पनीमा वा सम्पुर्ण बीमा क्षेत्रमा नै जस्तो असर पर्ने होस् । तर आज त ती सीइओहरुले विजनेश ल्याएर नाफा देखाउनु नै पर्ने हुन्छ । जसका लागि एजेन्ट र स्टाफलाई बढी लाभ नै दिएर भएपनि बीमा पोलेसी बिक्री गर्नु नै पर्छ । बजारमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नकै लागि भएपनि केही न केही त गर्न पर्छ यसैकारणले पनि नयाँ थपिएका जीवन बीमा कम्पनीहरुले गर्दा प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।
आफु बजारमा स्थापित हुनका लागि संयमित भएर लगानी गर्नुपर्छ । पछि थपिएका १० वटा कम्पनीहरुमा पनि केही कम्पनीहरुले असाध्यै राम्रोसँग संयमित भएर आफ्नो स्तर अनुसार नै विजनेश अघि बढाइरहेका छन् । केही कम्पनीहरुले मात्र असंयमित भएर आक्रमक रुपमा विजनेश बढाएका हुन् । नयाँ थपिएका १० वटै जीवन बीमा कम्पनीहरु धेरै भएका भन्न मिल्दैन ।
बीमा कम्पनीहरु बीच मर्जरको आवश्यकता परेको हो ?
बीमा समिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबाट पनि मर्जर गर्नु पर्छ भन्ने कुराहरु बेला–बेलामा कुरा आइरहेको हुन्छ । सबैको आ-आफ्नो सिद्दान्त हुन्छ । नियामक निकायले ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुदाँ हुदै कुन सिद्दान्त अनुसार १० वटा बीमा कम्पनी ल्यायो ? हरेक चीजको पछाडि तर्क हुन्छ । केही सोचेर नयाँ बीमा कम्पनी ल्याएको होला नियामक निकायले । सायद पुरानो बीमा कम्पनीहरुले पहुँज विस्तार गर्न नसकेर होला । जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकार अनुसार नयाँ कम्पनीहरु थपिएको हुनसक्छ ।
२०७४/७५ मा ९ लाख जनाले जीवन बीमा गरेको थिए भने ०७५/७६ मा १२ लाखले बीमा गरेका छन् । यो भन्दा अघिल्लो बर्षहरुमा साढे लाख ४ लाखभन्दा बिमित नै थिएनन् । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुँदा ४ लाखभन्दा थिएनन् भने १० वटा नयाँ कम्पनी थपिएपछि १२ लाख पुग्यो । नयाँ कम्पनी आए पश्चात् मार्केटको ग्रोथ त तेब्बरले भएको छ । आफ्नो अस्थित्वका लागि भएपनि नयाँ कम्पनीहरुले आक्रमकरुपमा पोलेसी बेचेर बजार बढाएका छन् ।
तर नयाँ कम्पनीहरुले नयाँ पोलेसी ल्याएर बजार ओगटे भनेर पुरानो कम्पनीहरु भन्नु भन्दा त्यसै अनुसार संयमित भएर प्रतिस्पर्धामा जानु पर्छ । मर्जर भन्ने बिषय बीमा क्षेत्र बिशेष जीवन बीमाको क्षेत्रमा किन आएको हो थाहा भएन । भर्खरैमात्र नयाँ कम्पनी थपिएका छन् । साच्चिकै संख्या बढी हुन्थ्यो भने २ वर्षघि नयाँ बीमा कम्पनीहरु थप्नु नै हुदैन थियो ।
कुनै समय आक्रमकरुपमा बजार विस्तारमा होमिएको प्राइम अहिले सुस्त गतिमा देखिन्छ नि, किन ?
जुनबेला प्राइम लाइफ बीमा बजारमा आयो त्यो समयमा मार्केटिङ्ग, ब्राण्डिङमा जुन किसिमको भ्राइव्रेन्ट ल्याएको थियो । शुन्य वा तीन विचार गराँै एक छिन भनेर ल्यायो । त्यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बीमा क्षेत्रमा यस सम्बन्धी सचेतना गजाउने थियो । नारा अनुसार बीमा गलाउँदा तीन वटा फाइदा हुने र नगराउँदा शुन्य हुने भनेको हो । त्यो प्राइम लाइफसँगमा सम्बन्धित हुने नारा थिएन । जुनसुकै कम्पनीसँग पनि बीमा गर्दा शुन्य वा तीन हुन्थ्यो ।
म त्यो बेला प्राइममा थिइँन । बाहिरबाट मुल्यांकन गर्दा त्यो नारामा प्राइमले लगानी गर्यो । तर त्यसको प्रतिफल अरु बीमा कम्पनीहरुले लिए । विषेशगरी प्राइम लाइफभन्दा पुरानो बीमा कम्पनीले धेरै लिए । किनभने उनीहरुको विजनेश, बोनश, बीमा कोषदेखि लिएर सबै ठुलो थियो । मानिसहरुमा बीमा गर्नु पर्ने रहेछ भनेर थाहा भएपछि कहाँ गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दा जुन पुरानो कम्पनी हो उनीहरुलाई नै बढी विश्वास गर्नु स्वभाविक नै थियो ।
आजभन्दा २ बर्ष अगाडि नै मैले ३ अर्बको पुँजी पुगेपछि ५ वर्षसम्म कम्पनी घाटा वा नाफा जे भएपनि न्युनतम १० प्रतिशत बोनस वितरण गर्छु भनेर घोषणा गरेको थिए । मसँग अहिले ३ वर्षसम्म बोनस बाढ्ने पैसा भइसकेको छ ।
तर, पछि विविध कारणले गर्दा प्राइम लाइफ अलिकति सुस्त भयो । २०७१ सालमा म प्राइममा आए, त्यसपछि हामीले अरु कुनै नयाँ कुरा नगरी त्यो नारालाई ब्राण्डिङमा पनि खर्च गरेनौँ । हामीले स्टाफ मोविलाइजेसन, मार्केटिङमा एजेन्सीहरुलाई बढी लगाउने भनेर त्यही नारामा लाग्यौं । त्यसको आधारमा हामी ठाँउ-ठाँउमा जाने विभिन्न एजेन्सीहरुलाई भेट्ने, उनीहरुलाई सिकाउने गर्यौं ।
हामीले आज टिम बनाएर पनि पुर्वदेखि पश्चिमसम्म तालिमहरु दिइरहेका छौँ । हामी आफंै र बाहिबाट समेत मान्छे ल्याएर एजेन्सी, स्टाफ सबैलाई प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकारका २ वटासम्म तालिम दिन्छौँ । स्टाफ र एजेन्सीलाई तालिम दिएर नै उनीहरुबाट नै बढी काम लिन पर्छ भन्ने मान्यतामा अहिले हामी हिडिरहेका छौँ । ब्राण्डिङको पाटोमा हामीले अरु केही गरेका छैन । ब्राण्डिङको लागि गरिने खर्चमा भन्दा कम खर्चमा स्टाफ र एजेन्टहरुलाई तालिममा खर्च हुन्छ । त्यसले गर्दा अहिले प्राइमको विजनेशको स्तर बढिरहेको छ । २०७१/७२ सालमा प्राइम लाइफको विजनेश ग्रोथ १४५ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमश ग्रोथ बढाउँदै गएका छौं ।
प्राइम लाइफलाई थप सफल बनाउन के कस्ता योजनाहरु बनाउनु भएको छ ?
हामीले नयाँ किसिमको ब्राण्डिङ नगरे पनि हामीले भइरहेको चिजलाई निरन्तरता दिँदै नया मिडियाहरु खोजेका छौँ । भर्खरैमात्र हामीले बस ब्राण्डिङका शुरु गरेका छौँ । यो लाइफ इन्सोरेन्स कम्पनी मध्येमा बस ब्राण्डिङ गर्न प्राइम लाइफ नै सबैभन्दा सबै भन्दा पहिलो हो । हामीले उपत्यका र यसका वरिपरी संचालन हुने हरेक बसमा प्राइम जीवन उपहार भनेर राखेका छौँ । यसैलाई हामीले उपत्यका बाहिरमा पनि गर्ने योजना बनाएका छौँ ।
आत्माहत्या गर्ने बित्तिकै पनि बीमाको पैसा पाइन्छ भन्यो भने त बीमा गरेर आत्माहत्या गर्ने मानिसको संख्या बढ्छ ।
अर्को प्राइम लाईफमा १ वटा बीमा गर्दा त्यसको १ वर्ष पछि त्यहि रकमको अर्को बीमा पोलेसी सित्तैमा दिएका छौँ । हामीले गत वर्षको साउन देखीको १७ देखी त्यो पोलेसी बेचेको यो बर्षको साउनमा हामीले जसको १ वर्ष पुगेको छ उसलाई सोहि रकम बराबरको अर्को पोलेसी सित्तैमा दिएका छौँ । हामीले पनि यस्तै प्रकारका पोलेसीहरुले नयाँ तरिकाले अगाडि बढेका छौ । अहिले जिवन बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न रोगहरुको उपचारमा बीमा लगरिदिने भनेर भनेको छ । त्यो हामीले २ वर्षअघि नै ल्याएका थियौं ।
हामी सहि सुचना दिएर समानुकुल परिवर्तन गरि काम गर्नु पर्छ । दुर्घटना मृत्यु बीमा गर्दा मरेपछि मात्र पैसा पाइन्छ तर अहिले हामीले मृत्यु बीमामा पिए भनेर जोडेका छौँ । जसमा बीमांक पाउनलाई मर्नु नै पर्दन । दुर्घटना शरिरको जुनसुकै अंगमा क्षति पुगेपनि कम्पनीको नियम अनुसार पैसा पाउँछ । यसरी नै समय अनुसार आफुलाई परिवर्तन गर्दै गएका छौँ ।
बीमा समितिले पुँजी पुर्याउन दिएको समय सकिएको छ, पुँजी वृद्धिका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
२०७१ सालमा प्राइम लाईफको चुक्ता पुँजी ४८ करोड १८ लाख रुपैयाँ थियो । म आउनेवित्तिकै पटक-पटक गरेर बोनश सेयर, हकप्रदसेयर जारी गरेर १ अर्ब ७८ करोड ४८ हाजर ३२५ रुपैयाँ पुँजी पुगेको छ । पुँजी बढाउन बीमा समितिले २०७५ असार मसान्तसम्मको समय दिएको हो । उसले ०७५ सालको नाफालाई पनि पुँजीमा जोड्न मिल्छ भनेको छ । विविध कारणले गर्दा प्राइम लाइफको फाइनान्सेस एप्रुभ हुन सकेको छैन । त्यस कारण हामीले साधारणसभा गर्न सकेको छैन् । त्यसैले पनि हामीले पुँजी पुर्याउन नसकेको हो । जबकी प्राइमसँग ०७५ सालमा ३२ करोड रुपैयाँ नाफा छ । २२ करोड रुपैयाँ भए हाम्रो पुँजी पुग्छ । एजिएक गर्न ढिलो भएको कारण पुँजी नपुगेको हो ।
हाम्रो साधारणसभा गर्न २/४ महिना ढिलो हुने भएर नै बीमा समितिको स्कृति लिएर लिएर विषेश साधारणसभा गर्दै छौँ । त्यो विषेश साधारणसभामा २०७४ साल सम्मको संचित मुनाफाबाट साढे १२ प्रतिशत बोनस सेयर बढ्ने छौँ । हाम्रो सेयर होल्डर फण्डमा भएको रिर्जभमा करिब २३ करोड रुपैयाँ छ । २ अर्ब पुर्याउन २२ करोड रुपैयाँ अवश्यक परेको छ । २०७६ असोज ७ गते हाम्रो विशेष साधारणसभा छ, त्यसमा बोनस सेयर वितरण पश्चात पुँजी पुग्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकासुरेन्स बन्द गराएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुलाई कस्तो असर पार्छ ?
बीमा कम्पनीहरुले साच्चिकै बीमा गराएको थियो भने राष्ट्र बैंकले मौद्रि नीतिमा नै तोकेर बन्द गराउनु पर्ने अवस्था आउँदैन थियो । मुलुकको मौद्रिक नीति भनेको सानोतिनो दस्ताबेज होइन । बजेट कार्यन्यवन गर्नलाई सहयोग गर्न मौद्रिक नीति निमार्ण गरिन्छ । समग्र मुलुकको लागि बन्ने दस्ताबेजमा बैंकहरुले बीमा कम्पनीहरुको एजेन्ट भएर काम गर्न पाइँदैन भन्नुको कारण के हो । यो भन्नु पर्ने अवस्था कसरी सिर्जना त्यो बुझ्नु पर्छ । कतै न कतै त गलत अभ्यास भएको थियो होला । मानिसहरुले यसलाई कसरी लिए तर यो धेरै गम्भिर विषय हो ।
बैंकलाई एजेन्सी बनाएर बीमा पोलेसी बेच्ने भनेको भर्खरै मात्र शुरु भएको त होइन । पहिलेबाट नै बैंकहरुलाई संस्थागत एजेन्ट बनाएर बीमा पोलेसीहरु बिक्री गरिन्थ्यो । प्राइम लाईफ शुरु भएको १२ वर्ष भयो । हामीले ११ वर्षअघिदेखि केही बैंकहरुसँग संस्थागत एजेन्सीको रुपमा काम गर्दै आएका थियौं । हिँजोसम्म नआएको कुरा आज कसरी आयो । र, बन्द गरियो ? यो खोजीको विषय हो । यसलाई नियमनकारी निकायले यसको जड खोज्नु पर्छ । १८/१९ वर्षअघिका पुराना बीमा कम्पनीहरुले पनि बैंकलाई संस्थागत एजेन्सी बनाएर व्यवसाय गरेको थियो । १८ वर्षसम्म नआएको विषय अहिले किन निस्कियो भनेर सबैले खोज्नुपर्छ । र, त्यसको जड उखेल्नु पर्छ । २ वर्षयता नयाँ कुरा के भयो त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ ।
अर्को कुरा गलत अभ्यास भएको हो भने त बैंक र बीमा कम्पनी दुबैको नियामक निकाय छ । गलत गरेको कसले हो, त्यो नियामक निकायले पत्ता लगाएर करवाही गर्नु पर्ने हो । वर्षौ वर्षअघिबाट चलिरहेको कुरालाई नै बन्द गराउनु त भएन नि । यो त गलत हो । यो त बिरामी भएको मान्छेलाई उपचार गर्नु भन्दा सिध्याइ दियो आनन्द हुन्छ भनेको जस्तो भयो । यो ठिक भएन, कसले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने अध्यान अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरिनु पर्छ ।
यदि बीमा कम्पनीहरुले साच्चिकै बीमा गराएको थियो यसले व्यवसायमा असर गर्दैन । जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई यो बन्द भएर त्यति असार गर्दैन । जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग मात्र ५ लाखभन्दा बढी एजेन्सी फोर्स छन् । ५ लाख अभिकर्ताहरु जुन समयमा पनि जनताको घर-घरमा नै पुगेर बीमा पोलेसी बिक्री गर्छन् । तर बैंक एजेन्सी भनेको संस्थागत एजेन्सी हो । बैंकको तलब खाएर बस्ने कर्मचारीले बीमा पोलेसी बिक्री गर्छन् । बैंकभित्र बसेर काम गर्ने कर्मचारीले बैंकको ढोकाभित्र छिर्ने मान्छेलाई मात्र बीमाको कुरा गर्छ । बिदाको दिन वा जनताको घरदैलोमा नै पुगेर त बीमा गराउँदैन । फरक एत्ति छ बैंकमा बीमा बिक्री हुँदा ठुलो रकमका पोलेसी बिक्री हुन्छन् भने अभिकर्ताहरुले स-सानो रकमका बीमा पोलेसीहरु बिक्री गर्ने हुन् ।
मानिसले बीमा बुझिसकेका छन् । तर आवश्यक पर्नेहरुले अभिकर्ताहरुसँग गएर पनि बीमा गराउँछन् । एजेन्सीहरु भएका बीमा कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ग्रोथमा खासै असर पर्दैन ।
तर बैंकमा नै आस्रित भएर गलत अभ्यास गरेर बीमा व्यवसाय गरेको भए भने अवश्य पर्छ । केही बैंकहरुको त कर्जाको निवेदनमा नै लेखिएको हुन्छ यतिसम्मको बीमा गर्दा यो कम्पनीमा यतिसम्मको बीमा गराउनु पर्छ भनेर । यस्तोलाई त म बीमा हो भनेर भन्दिन । यस्तो प्रकारको बीमा रिन्यु पनि हुँदैन । यो त ऋणीले कर्जा लिए वापतको खर्च लिएको हो । बैंकलाई एजेन्सी बनाएर काम गर्न रोक्दैमा विजनेश ट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर अब बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो एजेन्सी भने बढाउनु पर्छ ।
पछिल्लो समयमा जीवन बीमाको लाभको कारणले नै अपराधीक घटनाहरु बढेका छन्, यसको रोकथामका लागि बीमा कम्पनीहरुले कस्तो सचेतना अपनाएका छन् ?
बीमा कम्पनीहरुले इन्सोरेन्स गराउँदा ओभर इन्सोर, अन्डर इन्सोर गराउनु हुदैँन र प्रोडकको फिचर यस्तो हुनुभएन जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरुलाई झुक्याएर मैले लाभ लिन सक्छु भनेर बिमितले सोच्नु भएन । कति बिमांङ्क बराबरको जोखिम बीमा कम्पनीले लिने नलिने भनेर नीति नियम छ त्यो अनुसार चल्नुपर्छ । त्यो नियमनमा रहेर कारोबार गरेमा यस्तो खालको विकृतिहरु आउर्दैनन् । विकृति रोक्ने भनेको जराबाट नै त्यसको सम्भावनाहरुलाई न्युन गर्दै लानुपर्छ ।
जस्तो कसैले बीमाको लोभलालचमा बसेर बीमाको पैसा लिन सक्ला भनेर बीमा गरेको २ वर्ष सम्म दावी भुक्तानी नपाउने भनेर राखिएको छ । २ वर्षसम्म कुरेर नै बीमाको पैसा पाउनको लागि आत्माहत्या त गर्दन । बीमा गराउँदा नै यस्ता नियमहरु राख्यो भने विकृतिहरु न्युन भएर जान्छन् बीमा गराउँदा नै लोभ लालच हुने खालको बीमा पोलेसीहरु छन् भने विकृति आउँन् ।
पोखराको घटनामा हेर्दा ओभर इन्सोरेन्स भएको छ । मोवाइल रिप्यारिङ्ग गर्नेले श्रीमतीलाई १ करोडको बीमा गराएर जङगलमा लगेर मारेर बीमा रकम लिन खोजेको छ । त्यो मोवाइल रिप्यारिङ गर्ने मान्छेको वर्षको साढे ७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्छ बीमा कम्पनीले । १ पटक तिर्ने पनि होइन १५ वर्षसम्म वर्षको साढे ७ लाख रुपैयाँ मोवाइल रिप्यारिङ गर्ने मान्छेले तिर्न सक्छ त ? यो हेर्नु पर्छ ।
अर्को कुरा श्रीमान् कमाउने हो भने श्रीमतिको बीमा किन गरेको हो त्यो बुझ्नु पर्दैन, जो आर्थिक उपार्जन गरिरहेको छ उसको जोखिम बढी हुन्छ । अरुको कमाइमा अश्रित घरमा नै बस्ने मान्छेको जीवन त बहिर गएर कमाउने मान्छेको भन्दा धेरै हुदैन । श्रीमानको जिवन तलमाथि हुँदा उसको आर्थिक समस्या हुथ्यो । यसमा दावी भुक्तानीको लोभ भएको छ । त्यो बुझेरमात्र बीमा कम्पनीहरुले बीमा गराउनु पर्छ कम्पनीको अन्डर राइटिङ डिपार्टले राम्रोसँग हेर्नु पर्ने हो ।
बीमा कम्पनीहरुले यस्तो कुराहरुको स्टाफ वा एजेन्टहरुलाई तालिम दिनु पर्छ । र नियमक निकायले पनि यस्ता पोलेसीहरु पास गर्दा बुझेर मात्र पास गर्नुपर्छ ।